MVola: findramam-bola 1 tapitrisa Ar | NewsMada
MVola: findramam-bola 1 tapitrisa Ar
Manatsara hatrany ny tolotra omena ny mpanjifa ny Telma, amin’ny alalan’ny MVola, ampiasaina amin’ny fifanakalozam-bola, miara-miombona antoka amin’ny banky BNI Madagasikara. Isan’izany ny fahafahana mindram-bola hatrany amin’ny 1 tapitrisa Ar, eo no ho eo, amin’ny alalan’ny finday. Azo atao izany isan’andro, tsy mifidy ora, manerana an’i Madagasikara.
Tsotra ny fampiasana azy satria azo angatahina amin’ny alalan’ny finday, tsy mila manatona masoivoho, sady tsy mila antontan-taratasy foronina ihany koa. Haingana, tafiditra avy hatrany ao anatin’ny kaonty MVola, raha vao voasoratra ny sora-bola. Azo antoka, tsy misy mahalala ny fifampiraharahana natao, ary arovan’ny kaody miafina (code secret) an’ny mpanjifa.
Mahazo ity tombondahiny ity ny mpanjifa MVola, sady mampiasa MVola isan’andro rehetra. Honerana mandritra ny 30 andro ny vola nindramina, arakaraka ny fahafahan’ny mpanjifa. Tsindrina ny #111*1*3#, raha hiditra ao anatin’ity tolotra ity.